Areti-mifindra azo avy amin'ny pôrnôgrafia sy ny firaisana - The Reward Foundation
Areti-mifindra azo avy amin'ny firaisana (STI), izay antsoina koa hoe aretina azo avy amin'ny firaisana (STD) ary aretin-tratra (VD), dia aretina izay miparitaka matetika amin'ny firaisana, indrindra ny firaisana amin'ny fivaviana, ny firaisana ara-nofo ary ny firaisana amin'ny vava. Ny ankamaroan'ny STI amin'ny voalohany dia tsy miteraka soritr'aretina. Izany dia miteraka risika bebe kokoa amin'ny fampitana ny aretina amin'ny hafa.
Ny pôrnôgrafia dia manana andraikitra roa samy hafa amin'ny fomba ahafahantsika mieritreritra ny fiainam-pananahana ataontsika dia mety hisy vokany amin'ny fahasalamana.
Voalohany, raha mijery sary vetaveta sy filokana ianao, nefa tsy manao firaisana amin'ny olon-kafa, dia tsy ho voan'ny STI mifindra ianao. Tena marina izany, saingy tsy ny tantara manontolo. Mbola marefo amin'ny olana ara-pahasalamana ianarana ianao fa tsy tratry ny aretina. Raha lehilahy ianao, amin'ny fijerena pôrnôgrafia betsaka dia mbola manala sarona ny tenanao amin'ny mety ho olana maharitra amin'ny fihenan'ny erectile (PIED), ny anorgasmia na ny ejaculation tara. Raha vehivavy ianao, ny fijerena pôrnôgrafia anao dia mety mampiofana ny vatanao ho tia kilalao fanaovana firaisana na filan-droa fa tsy firaisana ara-nofo amin'ny tena sakaiza. Ireo mijery sary vetaveta mavesatra dia mampiofana ara-batana ho an'ny fanatanjahantena diso.
Faharoa, amin'ny fijerena pôrnôgrafia, mampiofana ara-tsaina ireo safidinao ara-nofo ianao mba te hamerina ny zavatra hitanao amin'ny pôrnôgrafia. Ny pôrnôgrafia be mpijery matetika dia faritra tsy misy kapaoty. Io dia mametraka faniriana ao an-tsainao tsy hiraharaha ny fimailo ho an'ny firaisana na ny sakana ara-batana hafa toy ny tohodrano nify rehefa manao firaisana amin'ny vava.
Firaisana ara-nofo azo antoka
Ny fanaovana firaisana ara-nofo azo antoka kokoa toy ny fampiasana fimailo, ny fananana vady ara-nofo kely kokoa, ary ny fiarahana amin'ny firaisana ara-nofo fotsiny ihany ny olon-kafa dia mampihena ny risika. Ny mpamono olona lehibe indrindra dia ny VIH sy HPV. Ireto misy fampahalalana fototra momba azy ireo.
Ny tsimokaretina VIH (immunité immunité Immérapie) dia miteraka HIV infection ary rehefa mandeha ny fotoana voan'ny aretina azo avy amin'ny tsimatimanota (SIDA). Ny VIH dia iray amin'ireo aretina mahafaty indrindra eto an-tany, laharana faha-2 amin'ny lisitry ny areti-mifindra avy amin'ny World Health Organization. Tamin'ny 2014 dia namono olona 1.4 tapitrisa teo ho eo ary olona hafa manodidina ny 35 tapitrisa no niara-niaina taminy. Any Etazonia dia manodidina ny 1.1 tapitrisa ny olona manana an'io, fa ny iray amin'ny valo kosa tsy mahalala, izay mahatonga azy ireo ahiana be amin'ny resaka famindrana ny aretina.
Papilomavirus olombelona na HPV dia viriosy ADN kely habe izay mamindra ny hoditra sy ny faritra mando amin'ny vatana toy ny vava, fivaviana, vozon-tranonjaza ary vozongo. Misy karazana HPV 100 mahery. Ny karazany fahita indrindra dia hita amin'ny hoditra ary miseho toy ny zana-tsipika hita eo amin'ny tanana. Misy karazana HPV sasany koa mamindra ny faritra misy ny lahy sy ny vavy. Ny HPV ara-pananahana no aretina mamindra indrindra any Etazonia sy manerantany. Misy karazana HPV 40 farafahakeliny mety hisy fiatraikany amin'ny faritra maha-lahy na vavy. Ny sasany amin'ireny dia "ambany risika" ary miteraka ketilenta ara-pananahana raha ny karazana "risika be" kosa dia mety hiteraka homamiadan'ny vozon-tranonjaza na karazana homamiadan'ny taovam-pananahana. Ireo karazana HPV mety hampidi-doza dia mety hiteraka karazana homamiadan'ny tenda ihany koa, antsoina hoe homamiadan'ny oropharyngeal, izay lasa be mpitia any Etazonia sy Eropa.
Ny viriosy HPV dia efa fantatra hatramin'ny ela teo amin'ny faritra fivaviana ary antony lehibe mahatonga ny vozon-tranonjaza, volo, penile ary homamiadana. Inoana fa mihabetsaka ny olona manao firaisana ara-nofo amin'ny mpivady marobe ary manao fanao amin'ny firaisana amin'ny vava ary vokatr'izany dia voan'ny HPV any amin'ny faritry ny loha sy ny vozona, ary mitombo ny tahan'ny homamiad orofarynx. Azo jerena ny fampidirana amin'ny antsipiriany kokoa ny HPV Eto.
Betsaka ny STI hafa izay tsy dia misy aretina mahafaty, nefa mbola ratsy amin'ny fahasalamanao ihany. Tsy hevitra tsara mihitsy ny manome aretina hafa!
Raha mazoto manao firaisana ianao, dia hendry foana ny mahazo torohevitra na fanampiana avy amin'ireo matihanina momba ny fahasalamana ara-nofo.
Manoro hevitra izahay ao Glasgow Sandyford, izay manolotra serivisy manokana ho an'ny pelaka sy ny lehilahy roa amin'ny alàlan'ny Tetikasa Steve Retson. Any Edinburgh dia mandeha ny olona Fahasalamana ara-nofo any Lothian.